Uhlaziyo lweAmerican-1763 ukuya kwi1789
Iincwadi zeAmerican Revolution
Imephu zeMelika zoMvukelo
Imvukelo yaseMelika # #NNUMX
I-American Revolution enqamlezayo
Amaxwebhu eAmerican Revolution
Imibuzo yaseAmerican yesincoko
Imifanekiso yohlaziyo lwaseMelika
Imbali yaseMelika yoQhushululu
Imibuzo yeAmerican Revolution #1
Imibuzo yeAmerican Revolution #2
Imibuzo yeAmerican Revolution #3
Imibuzo yeAmerican Revolution #4
Imibuzo yeAmerican Revolution #5
Imibuzo yeAmerican Revolution #6
Amanyathelo emvukelo yaseMelika
Iikowuteshini zohlaziyo lwaseMelika
Amaxesha eAmerican Revolution
Izihloko zoMvukelo waseMelika
Uhlaziyo lwaseMelika ngubani
Uhlaziyo lwegama laseMelika lweMelika-iikhonsepthi
Uhlaziyo lwegama laseMelika leMicimbi-yeziganeko
I-American Revolution yelizwi - abantu
I-American Revolution izwisearch -indawo
Amandla oVavanyo aseMelika
The Revolution yaseMerika yaqala embindini we1760s njengemvukelo yoonontloko baseBritani ababehlala ecaleni kwesahlulo sasempuma seNyakatho Melika. Yaphela i1789 ngokudalwa kwesizwe esitsha, ixhaswe ngumgaqo-siseko obhaliweyo nenkqubo entsha karhulumente.
Uhlaziyo lwaseMelika lube nefuthe elikhulu kwimbali yale mihla. Icele umngeni kwaye ijongele phantsi amandla angabalulekanga oonobumba baseYurophu. Uthathe isikhundla sobukhosi baseBritani ngurhulumente osebenzayo osekwe kwimigaqo yokuKhanyisela ye-republican, inkululeko ethandwayo kunye nokwahlula-hlula kwamandla.
Uhlaziyo lwaseMelika lubonise ukuba ukuvukela kungaphumelela kwaye nabantu abaqhelekileyo banokuzilawula. Iingcamango zayo kunye nemizekelo yaphefumlela i-French Revolution (1789) kunye nokuhamba kwexesha lesizwe kunye nokuzimela. Eyona nto ibaluleke kakhulu, inguqu yaseMelika yazala i-United States, ilizwe elinemilinganiselo yezopolitiko, amandla ezoqoqosho kunye namandla omkhosi abumbe kwaye achaza ilizwe langoku.
Ibali leMvukelo yaseMelika yenye yeenguqu ezikhawulezayo kunye nentuthuko. Ngaphambi kwee-1760s, i-13 colonies yaseMelika yayonwabele amashumi eminyaka yokuchuma kwezoqoqosho kunye nobudlelwane obuhle neBritane. Uninzi lwabantu baseMelika bazigqala njengabanyanisekileyo baseBritane; banelisekile ukuba ngabalawulwa ngukumkani waseBritane onobulumko nonobubele kunamakhoboka kunye neerhuluneli zomnye umntu owayephatha gadalala. Ukuba inguquko inokwenzeka kuluntu lwaseMelika lobukoloniyali lwalubonakala lungathandekiyo.
Ngexesha eliphakathi le-1760s, oku kunyaniseka kwiBritane kwavavanywa ngumcimbi obonakala ungahambelani: ukungavumelani kunye neengxoxo malunga nemigaqo-nkqubo nerhafu karhulumente. Kwisithuba seminyaka elishumi, abalimi baseMelika babezixhobise ngeeseke kunye neepitchforks besiza edabini besiya kulwa nemikhosi yaseBritane eLexington, Massachusetts. Nge-1776 ephakathi, abezopolitiko baseMelika bakuthathela ingqalelo ukubopheleleka e-Bhritane kangangokuba bavotela inkululeko. Inkululeko le yeza nemiceli mngeni emibini: imfazwe neBritane, igunya lomkhosi obalaseleyo wehlabathi, kunye nemfuneko yenkqubo entsha karhulumente. Ukuhlangabezana nale mingeni kuphawula isigaba sokugqibela sohlaziyo lwaseMelika.
Iwebhusayithi yeAlfa History yeAmerican Revolution iqulethe amakhulu emithombo ephambili kunye neesekondari zokukunceda ukuba uqonde imicimbi eseMelika phakathi kwe1763 kunye ne1789. Wethu amaphepha esihloko, ezibhalwe ngoochwephesha abanamava kunye nababhali-imbali, bonelela ngesishwankathelo esifutshane semicimbi ephambili kunye nemicimbi. Baxhaswe zizinto ekubhekiswa kuzo njenge amaxesha abekiweyo, Iglosari, Iiprofayili zebhayiloji, iimephu zengqondo, iikowuti, imbali Iiprofayili zabaphambili ngembali. Iwebhusayithi yethu inoluhlu lwezinto ezenziwa nge-intanethi ezifana amagama anqamlezayo kunye nokukhetha okuninzi Imibuzo, apho unokuvavanya kwaye uvuselele ukuqonda kwakho kweMelika ekuguqukeni.
Ngaphandle kwemithombo ephambili, yonke imixholo kule webhusayithi © Imbali ye-2015-19. Lo mxholo awunakukopishwa, upapashwe ngokutsha okanye usasazwe ngokutsha ngaphandle kwemvume ecacileyo yezeMbali yeAlfa. Ngolwazi oluthe kratya malunga nokusetyenziswa kwewebhusayithi yeAlfa yeMbali kunye nomxholo, nceda ubhekise kuthi Imigaqo yokuSebenzisa.
1765 ukuya 1773
1774 ukuya 1776
1777 ukuya 1783
Malunga nale ndawo:
I-American Revolution iqulethe amanqaku, imithombo kunye nembono yeziganeko eMelika phakathi kwe1763 kunye ne1789. Indawo yenziwa kwaye yagcinwa yiAlfaum kwaye inamagama e-100,000 kumaphepha e-200. Ngolwazi oluthe kratya, tyelelo lwethu Ikhasi le FAQ or Imigaqo yokuSebenzisa.